Al-Shabaab oo Weeraray War-maxan ee Gobolka Shabeelaha Hoose | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Al-Shabaab oo Weeraray War-maxan ee Gobolka Shabeelaha Hoose
Dagaalyahano katirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa saakay aroor hore waxa ay weerar culus ku qaadeen deegaanka War-maxan ee Gobolka Shabeelaha Hoose, deeganakan ayaaan waxaa fariisimo ku lahaa ciidamo katirsan Milatariga Soomaaliya.
Dadka Deegaanka ayaa ku waramay in dagaal aad u culus uu dhax maray ciidamada Dowlada ee ku sugnaa deegaanka War-maxan iyo Shabaabkii soo weeraray, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in mudo ah socday.
Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in ay qabsadeen qeybo badan oo deegaanka kamid ah, waxa ayna sheegeen saraakiil kooxdasai u hadashay in ay la wareegeen gaadiid dagaal sidoo kale ay dileen askar badan.
Wararka la helayo ayaa sheeaya in dagaalka uu ka dhashay qasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray Ciidamada Dowlada iyo kuwa Al-Shabaab, walina si dhab ah looma oga inta uu la egyahay qasaaraha.
Maamulka Gobolka Sh/Hoose ayaa beeniyay in ay Al-Shabaab qabsadeen deegaanka War-maxan, waxa uuna mamaulku sheegeen in ciidamada dowlada ay ska caabiyeen dagaalyahanadii saakay weerarka kusoo qaaday.
Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro gaadmo ah waxa ay ku qaadaan deegaano ay ku sugan yihiin ciidamada dowlada Soomaaliya, weeraradan ayaana inta badan dhaca xili ay ciidamada ay hurdaan oo aroor hore ah.